ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): (၂၀)နှစ်မြောက် မွေးနေ့နှင့် ရက်မြတ်မင်္ဂလာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:47 AM
lin let, happy 20th birthday & many congrats4ur wedding! may u hvahappy life ahead! :) wif luv, the reader!
A _nam said...
မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ နဲ့ လေးဖြစ်ပါစေ။ လာလည်သွားပါတယ်။ :)
မလင်းလက် ... မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ...
ပျော်စရာ မွေးနေ့ပါ ညီမလေး...
၂၀နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကစလို့ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ...
မင်္ဂလာပေါင်းစုံညီပေါ့ဗျာ... အလုံးစုံသော ကောင်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဗျာ :)
ဒီနှစ် ဒီလဟာ ညီမတွက် မင်္ဂလာ အရှိဆုံးလပဲ....
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ပွဲနဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေ...
Happy Birthday ပါမလင်းလက် မွေးနေ့ မှာ အရမ်းကိုပျော်မှာပဲနော်။ ကြင်စဥိး ဇနီးမောင်နှံ ကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ :)
ko byz said...
မင်္ဂလာပေါင်းစုံညီပေါ့ဗျာ... အလုံးစုံသော ကောင်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဗျာ
သမီးလေးးး နောက်ကျဆုတောင်းပေမဲ့ မေတ္တာအတိနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. အသက် ၂၀ပြည့်မွေးနေ့ကစလို့ နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်.. ချစ်သောသူများနဲ့ အတူတကွ နေရ.. ပျော်ရ.. မော်ရ ပါစေ....
Congratulations! Nyimalay :)
ဆုတောင်းနောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော် :)
အားပါး..မတွေ့တာကြာတဲ့နောက်ပိုင်း ခြေလှမ်းတွေသွက်တယ်ဟေ့...။ အမေရေ...။ နောက်ကားတွေ ကျော်တက်ခံရပြီဗျ...။ Congratulation ညီမရေ...။ သာယာဖြောင့်ဖြူးသောဘ၀လမ်းကို..။ ချစ်သူနဲ့အတူ အသက် ၂၀ ပြည့်မွေးနေ့က စလို့ ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျား... :)
လင်းလက်ရေ.. ခုပဲ လင်းလက်တို့ပွဲကို ချီးမြှောက်ပြီး ပြန်လာပြီ.. ဘယ်လိုဆုတောင်းပေးရမှန်းမသိဘူး.. ခု စိတ်ထဲမှာ လင်းလက် wedding dress လေးနဲ့ပုံကိုပေါ်ပြီး ဆုတောင်းပေးချင်လာတာလေးကတော့ ကာတွန်းကားတွေထဲကလို..Happily ever after from today onwards ပါနော်... သတို့သမီး အရမ်းလှတယ်ဗျို့.. အားကျပင်မဲ့ လုပ်ဖို့အဖော်ကိုတောင် ရှာပုံတော်ဖွင့်တုန်းမို့ ဖိတ်စာက တစ်ခြမ်းပဲရှိသေးတယ် ညီမရေ...
ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်...
ဒီလင် ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ... :D (လူကြီး ၀င်လုပ်တာ)
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ။ အဆင်ပြေပါစေ...